Waa maxay micnaha nolasha?
Su’aal: Waa maxay micnaha nolasha?
Jawaab: Waa maxay micnaha nolasha? Sidee ayaan ku heli karaa ujeedada, oofinta, iyo qancinta nolasha? Ma helayaa filashada lagu gaarayo wax waara oo ahmiyada? Dad badan welidgood ma joojin in ay tixgeliyaan waxa su’aalahaan muhiimka ah. Waxay gadaal u eegaan sanooyin kadib iyo la yaabay sababta xiriirkooda dhinaca ugu dhacay iyo sababta ay u dareemeen firaaqo, xitaa inkastoo laga yaabo in ay gaaraan waxa ay dejiyeen si ay u gaaraan. Hal qof oo ciyaara baasboolka kaas oo gaarsiiyay baasboolka Hoolka Caannimada waxaa la weydiiyay waxa uu jaclaan lahaa in uu qof u sheego markuu kowdii bilaabo ciyaarta baasboolka. Wuxuu ku jaawabay, “waxaan jeclaa in uu qof ii sheego markaad gaartid kor, wax meesha jira malahan." Hamilooyin badan ayaa soo bandhigay qasnaanta kaliya sannooyin kadib ee lagu lumiyay dabagalkooda.
Bulshadeena bani’aadamnimada, dadka waxay dabagalaan ujeedooyin badan, oo ka fakariya in iyaga dhaxdooda ay iska helayaan micno. Qaar kamid ah raad raaca waxaa ku jira guusha ganacsiga, hantida, xiriiro wanaagsan, galmada, madadaalada, iyo wanaag u sameynta dadka kale. Dadka waxay xaqiijiyeen in marka ay gaaraan hamiladooda hantida, xiriirada, iyo raaxada, waxaa weli jira banaan qotodheer oo gudaha, dareenka eberka ee u eg in aysan wax buuxineynin.
Qoraaga buugga baaybalka ee Wacdiyadii wuxuu sheegay dareenkaan markuu dhahay, “Micno la’aan! Micno la’aanta!...Aan wado micna laheyn! Wax walba waa micna la’aan" (Wacdiyadii 1:2). Boqor Suleymaan, qoraaga Wacdiyadii, wuxuu lahaa hanti aan la xisaabi karin, xikmad qofkale aan laheyn waqtigiisa ama waqtigeena, boqolaal naago, daaro iyo beero ee ahaa dareenka boqortooyada, cuntada ugu wanaagsan iyo qamriga, iyo qaab walba ee madadaalo ah ee laheli karo. Iyo wuxuu hal qodob ku yiri wax walba oo qalbigiisa rabay, wuu dabagalay. Iyo weli wuxuu ku soo koobay “nolosha sida waafaqsan quraxda”—nolosha noolaatay sida inkastoo dhammaan ay jirto nolol waa waxa aan ku arki karno indhaheena iyo waaya aragnimada ee dareenkeena—waa micno la’aan! Maxay u jiraan sida duleelo noocaas ah? Sababtoo ah Ilaahey wuxuu abuuray wax ka baxsan waxa aan halkaan kula kulmi karno-iyo-hadeer. Suleymaan wuxuu yiri Ilaahey, “Wuxuu sidoo kale ku sameeyay daa’in qalbiyada aadanaha..." (Wacdiyadii 3:11). Qalbigeena waan ka warqabnaa in “halkaan-iyo-hadeer” aysan aheyn dhammaan waxaas.
Bilawgii, buuggii ugu horeeyay ee Baaybalka, waxaan ogaanay in Ilaahey uu ka abuuray aadanaha muuqaalkiisa (Bilowgii 1:26). Tani waxay la micna tahay in aan aad ugu dhawnahay sida Ilaahey ee kabadan waxa kale ee aan nahay (qaab nolol kale). Waxaa kale oo aan ogaanay in ka hor inta aadanaha uusan dambi gelin iyo inkaarta dambiga waxay ka imaatay dhulka, sheeyada xiga waxay ahaayeen run: (1) Ilaahey wuxuu ka sameeyay aadanaha aasaaska bulshada (Bilowgii 2:18-25); (2) Ilaahey wuxuu siiyay aadanaha shaqo (Bilowgii 2:15); (3) Ilaahey wuxuu wehel layahay aadanaha (Bilowgii 3:8); iyo (4) Ilaahey wuxuu siiyay aadanaha xukun dhulka ah (Bilowgii 1:26). Waa maxay muhiimada sheeyadaan? Ilaahey wuxuu ugu talagalay mid walba oo ka mid ah kuwaan fullinta nolasha, laakin kuwaan oo dhan (gaar ahaan raacida aadanaha ee Ilaahey) si xun u sameeyay dambiga aadanaha uu sameeyay iyo natiijada inkaarta ee dhinaca dhulka (Bilawgii 3).
Muujinta, buugga ugu dambeeyay ee Baaybalka, Ilaahey wuxuu sheegay in uu baabi’inayo dhulkaan hadeer iyo sammada sida aan u ognahay iyaga iyo u horseedo xaalada daa’inka ah iyadoo la aasaasayo sammo cusub iyo dhul cusub. Xiligaas, wuxuu soo celinayaa raacida buuxdo iyo aadanaha oo la dhimay, iyadoo kuwa an la dhimin waxaa loo tixgelinayaa kuwa aan qiima laheyn waxaana lagu tuurayaa Baliga Dabka ah (Muujintii 20:11-15). Inkaarta dambiga waxaa lagu sameynayaa meel ka baxsan; ma jireyso wax dambi ah, murug, jiro, dhimasho, xannuunka, iwm. (Muujinta 21:4), iyo kuwa aaminsan waxay helayaan sheeyada oo dhan. Ilaahey wuxuu la dagayaa iyaga, iyo waa in ay noqdaan wiilashiisa (Muujinta 21:7). Sidaas darteed, waxaan nimid wareega buuxa ee Ilaaheygaas na abuuray ah si aan ula lahaano wehelnimo, aadanaha dambiyaysan, jabinta wahelnimada, Ilaahey wuxuu soo celiyaa in wehelnimada buuxa ee xaalada daa’inka ee kuwa loo arkay in ay qiimo ka leeyihiin Xaqiisa. Hadeer si aad u aadid gaarista dhinaca nolosha wax walba iyo kaliya in lagu dhinto si ka gooniyeysan Ilaahey ee daa’inka waxay ka xumaaneysaa quudinta! Laakin Ilaahey wuxuu sameeyay qaab oo aan lagu sameynin kaliya naxariista daa’inka suurtgal ah (Luukos 23:43), laakin sidoo kale nolosha dhulka ee ku qancineyso iyo micno leh sidoo kale. Sidee naxariistaan daa’inka ah iyo “samada dhulka”u heleen?
MICNAHA NOLASHA EE LAGU SOO CELIYAY DHINACA CIISE MASIIXI
Micnaha dhabta ah ee nolosha, labadaba hadeer iyo daa’inka, waxaa laga helaa soo celinta xiriirka Ilaahey ee horay u lumay waqtiga Adam iyo Eve ay dambiga galeen. Maanta, xiriirkaas Ilaahey waxaa kaliya uu suurtagal ka yahay dhinaca Wiilkiisa, Ciise Masiixigat (Falimaha Rasuulada 4:12; Yooxanaa 14:6; Yooxanaa 1:12). Nolasha daa’inka ah waxaa la helaa goortii qofka uu ka towbadkeeno dambigiisa/dambigeeda (oo san markale rabin in uu sii wado laakin uu rabo in Masiixiga uu bedelo iyaga iyo ka dhigo qof cusub) iyo bilaabo ku xirnaanshada Ciise Masiixi sida Badbaadiye (fiiri su’aasha “waa maxay qorshaha badbaadinta?” ee warbixin badan ee arintaan aadka u muhiimsan).
Micnaha dhabta ah ee nolosha lagama helo kaliya helida Ciise sida badbaadiye (sida cajiibka ah ee taasi ay tahay). Bedelkii, micnaha dhabta ah ee nolasha goortii hal uu bilaabo in uu raaco Ciise sida raaciyahiisa, Barashadiisa, marka waqti lagu isticmaalo Eraygiisa, Baaybalka, Lahadalkiisa ee docada, iyo la shaqeynta Isaga ee uhogaansanaata Amarkiisa. Haddii aad tahay qof aan aaminsaneyn (ama laga yaabo qof cusub oo aaminsan) waxaad u dhawdahay in aad nafsadaada ku dhahdid, “ in aysan u dhawaaqin mid aad farxad u leh ama aniga la ii fullinayo!" Laakin fadlan aqri waxyara dheer. Ciise wuxuu sheegay bayaanada xigga:
“Ii imaw aniga, dhammaantiin oo kuwa daalan iyo culeyska saaran, iyo waxaan idin siinayaa nasiinyo. Ku qaada harqoodkeyga dushiina iyo wax iga barta aniga, waxaan ahay qof dabacsan iyo qalbiga ka wanaagsan, iyo waxaad nasiinyo ka heleysiin ruuxiina. Harqoodkeyga wuu sahlanyahay iyo culeyskeyga waa qafiif” (Matayos 11:28-30). “Waxaan u imid in laga yaabo in ay helaan nolol, iyo ku helaan si buuxda” (Yooxanaa 10:10b). “Haddii qof idinka mid ah gadaasheyda imaado, waa in uu diidaa shaqsigiisa iyo istilaabkiisa qaadaa iyo anigaa isoo racaa. Qofwalba oo rabo in uu noloshiisa badbaadiyo wuu luminyaa, laakin qof walba oo noloshiisha ii lumiyo aniga wuu helayaa” (Matayos16:24-25). “Naftaada ku naciimi ILAAHEY iyo wuxuu ku siinayaa dooqa qalbigaaga” (Sabuuradii 37:4).
Waxa ay ayadahaan oo dhan ay leeyihiin waa in aan dooq leenahay. Waxaan sii joogteyn karnaa in aan jaheyno nololaheena gaarka ah, taas oo sababtay nolol ebar ah, ama waxaan dooran karnaa in aan dabagalno Ilaahey iyo rabitaankiisa ee nolosheena oo qalbiga oo dhan ah, taas oo sababeyso ku noolaanshaha nolosha buuxdo, lahaanshaha go’aanka lagu buuxinayo qalbigeena, iyo raadinta wax raali laga yahay oo lagu qanancsanyahay. Tani waxay sidaan u tahay sababtoo ah Eebaheena wuuna jecelyahay iyo noo go’aansaday meesha ugu wanaagsan (muhiim ma ahan nolosha ugu sahlan, laakin fullinta ugu badan).
Haddii aad tahay taageero ciyaaro iyo go’aansatay in aad aado ciyaar xirfadeed, waxaad ku isticmaali kartaa dhoor doolar iyo waxaad ka heleysaa korsi “sanka-dhiigo” safka sare ee kore ee garoonka ama waxaad bixin kartaa dhoor boqol oo doolar iyo si aad ugu dhaw ula socotid iyo ficilka. Waxay la mid tahay midaas ku jirto nolosha Masiixiyiinta. Daawashada shaqada Ilaahey waaqiciga ma loogu talagalin Axada Masiixiga. Maysan dhiibin qiimaha. Daawashada waaqiciga shaqada Ilaahey waa raaciye qalbiga oo dhan ah ee Masiixiga kaas oo dhab ahaantii joojiyay dabagalka go’aankiisa/go’aankeeda si markaas isaga/iyada ay u dabagalaan ujeedooyinka Ilaahey. Waxay bixiyeen cawaaqiibta (oo ay si buuxda usugu dhiibeen Masiiciga iyo Rabitaankiisa); waxay la kulmayaan nolol buuxdo; iyo waxay wajahi karaan nafsadooda, qof raacahooda ah, iyo Sameeyahooda oo aan shalaay ku jirin! Cawaaqiibta ma bixisay? Marabtaa in aad bixiso? Hadii ay sidaas tahay, ma gaajooneysid micnaha ka dib ama ujeedada marlabaad.